Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 2t l0813 lah
Ilay mpaminany very hevitra
Alahady 19 May
Vakio ny Habakoka 1. Inona ireo fanontaniana napetraky ny mpaminany tamin’Andriamanitra? Impiry moa isika no hita mametraka karazam-panontaniana toy izany na dia tsy mitovy amin’ny toe-javatra niainan’i Habakoka aza ny zava-mitranga iainantsika ankehitriny?
Miavaka amin’ireo mpaminany hafa i Habakoka satria tsy nitondra teny avy tamin’Andriamanitra ho an’ny olona izy fa niresaka momba ny olona tamin’Andriamanitra. Manomboka ny tolona ataony amin’ny fiezahana hamantatra ny tanjon’Andriamanitra izy amin’ny hiakam-pitarainana manao hoe: “Mandra-pahoviana, Jehovah ô?” Entina hilazana endrika fitomaniana io karazam-panontaniana io ao amin’ny Baiboly (Sal. 13:1, Jer. 12:4). Maneho fotoan-tsarotra izay tian’ilay olona miteny hitadiavana fanafahana izany.
Ny fotoan-tsarotra izay nitadiavan’i Habakoka vonjy dia ny herisetra izay nanjaka teo amin’ny fiaraha-monina. Ny teny hebreo fototra ilazana ny “herisetra” dia ny hoe hamas; ampiasaina in-6 izy io ao amin’ny bokin’i Habakoka. Entina ilazana fihetsika mandratra ara-batana sy ara-môraly atao amin’ny hafa izany (Gen. 6:11).
Amin’ny maha-mpaminany azy dia fantatr’i Habakoka tsara hoe manao ahoana ny fitiavan’Andriamanitra ny rariny sy ny fankahalany ny fampijaliana. Noho izany dia tiany ho fantatra ny antony mbola aneken’Andriamanitra ny hitohizan’ny tsy rariny. Tsikaritry ny mpaminany Habakoka ny herisetra sy ny tsy fankatoavan-dàlana izay mahazo vahana teo amin’ny manodidina azy rehetra, ary toa mandresy ny marina mihitsy aza ny ratsy fanahy. Navadik’ireo manana fahefana ny rariny, tahaka izay efa niseho tamin’ny andron’i Amôsa (Amôsa 2:6–8), sy izay mateti-pitranga ankehitriny ihany koa.
Ny valin-teny avy amin’Andriamanitra dia maneho ny drafitra novolavolainy momba ny ho avy. Hampiasa ny tafika babilônianina Andriamanitra mba hanafaizany ny vahoakany. Tampoka tamin’ny mpaminany Habakoka izany filazana izany. Tsy azony novinavinaina mihitsy hoe hampiasa io tafika tsy misy indrafo io Andriamanitra hananarana ny Joda. Ao amin’ny andininy fahavalo, ireo mpitaingin-tsoavaly babilônianina dia ampitahaina amin’ny leôparda, sy ny amboadia ary ny voromahery – biby mpihaza izay mitondra fahafatesana mahery vaika amin’ireo hazany noho ny hafainganam-pandehany sy ny heriny.
Tsy nisaintsaina akory i Babilônina tsy misy indra fo sy feno avona fa hadinina aminy ny ataony. Tsy nitady izay ibebahana izy ary tsy niezaka akory ny hanonitra ny ratsy vitany. Nanohitra tanteraka ny lamina fototry ny fiainan’ny voary izy. Nolazaina tamin’i Habakoka fa ny tafika babilônianina dia hampiasaina ho toy ny “tsorakazon’ny fahatezeran’ Andriamanitra” (Isa. 10:5). Ary amin’ny andro iveloman’i Habakoka no hahatongavan’izany famaizana izany (Hab. 1:5). Mampametraka fanontaniana saro-baliana mikasika ny fahamarinan’Andriamanitra izany toe-javatra mitranga rehetra izany.
Ahoana no hahafahantsika mianatra mitoky amin’ny fahatsaran’Andriamanitra sy ny fahamarinany amin’ny fotoana ahitana fa toa feno faharatsiana sy tsy fahamarinana izao tontolo izao? Inona no vahaolana tokana azontsika iantsampazana?